I-TAAPSEE PANNU'S 'LOOOP LAPETA', MAHESH BABU'S 'MAJOR', EZINYE IIFILIMU EZILI-15 EZIZA KUKHUTSHWA KUNYAKA OLANDELAYO - HOLLYWOOD
I-Taapsee Pannu's 'Looop Lapeta', Mahesh Babu's 'Major', ezinye iifilimu ezili-15 eziza kukhutshwa kunyaka olandelayo
Isilayidi esitsha esineefilimu ezili-17, kunye neHollywood, iHollywood, kunye neemovie zolwimi lommandla njengeTaapsee Pannu's Umtya weLapeta ‘, Bhanyabhanya webhanyabhanya’ Indoda yesigcawu: Akukho Ndlela yokuGoduka ‘, Mahesh Babu’ Mkhulu ', Sele iza kuphehlelela kwiithiyetha ngaphezulu konyaka olandelayo, i-Sony Imifanekiso bhanya-bhanya yaseIndiya yaziswa ngoMvulo. Isitudiyo songeze kwisibhengezo sokuba siyakuphehlelela abalawuli abatsha aba-4 kule yr.
Ngaphandle kokuphazamiseka okukhulu phakathi kweshishini lokuzonwabisa kule minyaka mibini idlulileyo ngenxa yobhubhane we-COVID, istudiyo sikwazile ukuba nesibindi kunye nezinto ezahlukeneyo zonyaka olandelayo. Ukwabelana ngolwazi kwi-Twitter, iqumrhu labhala, iSony Pictures Film India yonke isetelwe ekuchazeni ngokutsha ukuzihlaziya kwe-blockbuster kunye nokukhutshwa okungaphezulu komhla okwenzelwe iinyanga ezili-12 ezilandelayo. Wamkelekile kwakhona kumkhulu kunobomi, uvuyo, iimuvi zethikithi elikhulu, kunye nomlingo wokuntywila wokubalisa amabali ngoku siphose kakhulu.
Funda i-tweet apha:
Nalu uluhlu lwezinto eziphambili ezikhutshiweyo:
UTera Kya Hoga Mhle
Ekhokelwa nguBalwinder Singh Janjua wokuqala, umbhali womboniso weqonga we Saand Ki Aankh kwaye Mubarakan , Umboniso bhanyabhanya uya kuba ngumdlalo-weqonga okrelekisayo obandakanya u-Illeana D'Cruz kunye noRandeep Hooda kwindima ebalulekileyo. Umboniso bhanyabhanya uyakuthi ibali lomfazi onesidima olwa ne-India's obsession engapheliyo kunye ne-pores ethembekileyo nolusu.
I-Taapsee Pannu-ngaphambili Umtya weLapeta lulungelelwaniso olusemthethweni lwemovie yaseJamani enesihloko Qalisa uLola . Umboniso bhanyabhanya ukhokelwa ngumenzi wefilimu uAakash Bhatia kwaye ukongeza iinkwenkwezi uTahir Raj Bhasin ngomsebenzi owaziwayo.
Umqondisi weSabbir Khan ngumnyhadala wokuzonwabisa onokubonisa inkwenkwezi u-Abhimanyu ekhokeleni kunye novakalelo lwewebhu uShirley Setia kunye noShilpa Shetty.
Iveliswe nguMahesh Babu, imovie ixhomekeke kubomi be-26/11 ehlasela umfel 'ukholo uMajor Sandeep Unnikrishnan. Uncedwe nguShashi Kiran Tikka, umboniso bhanyabhanya ophethe uAdivi Sesh, uSobhita Dhulipala, Revathi, Prakash Raj, kunye noSaiee Manjrekar. Umboniso bhanyabhanya udutyulwe kwiTelugu nganye nakwisiHindi. Inokuphinda isungulwe ngesiMalayalam.
Umqondisi we-Umesh Shukla ujikeleze ukungalunganga kwendlu, eneenkwenkwezi uMrunal Thakur, Paresh Rawal, Abhimanyu, Sharman Joshi, Vijay Raaz, kunye noDivya Dutta kwiindima ezibalaseleyo.
Ezinye iimovie zaseIndiya ezisungulwe yistudiyo eziqulethe into engaphantsi kwamanzi ' Ukuntywila ’ ezinokuphawula ukuqala kwolawulo kweNitin Parmar, idrama yothando ' Saale Aashiq ' Uncedwe nguSidharth-Garima, owayesebenza njengababhali eRam Leela, ePadmaavat, eKabir Singh phakathi kwabanye.
Phakathi kweemovie zaseHollywood, istudiyo sisetelwe ukumiliselwa ‘Spiderman: Akukho Ndlela Yasekhaya’ Ekhokelwa nguJon Watts iinkwenkwezi zikaTom Holland, zikaTom Hardy ‘Ingca 2- Makubekho Inkathazo’, URodo Sayagues ' ‘Musa ukuphefumla 2’ oko kubandakanya uStephen Lang, ‘Igumbi lokubaleka lesi-2: Itonamenti yeeNtshatsheli’ , KaJason Reitman ’ Ghostbusters - Emva kokufa ' , 'Unchched', 'Morbius', 'Ububi babahlali: Wamkelekile kwiRaccoon City', 'Indoda Evela eToronto' kwaye 'Uloliwe Bullet '
Izigaba: Iwiki Hollywood Iindaba
UFerran Torres-ukubaluleka kweNet, i-Bio, iWiki, ubudala, i-Career, ubude, umhla wokuzalwa
I-biografi kaFerran Torres igcwele idatha efana nebhayiloji, ixabiso elifanelekileyo, umvuzo, iindaba zokudlulisa, iValencia, iManchester City, izibalo, utata wokwenyani, ukuthandana, intombi, umama, usapho, iqela langoku, isikhundla, izihloko zeklabhu, ubuzwe, ubudala, usuku lokuzalwa, Abantakwenu, ubomi bokuqala, ubude, odumileyo nangaphezulu
Uyathandwa! UAriana Grande kunye neNkwenkwana uDalton Gomez bashushu kwaye banzima
Umama 'weDoomsday' umama uLori Vallow kunokwenzeka ukuba abekwe ityala lokusweleka komyeni wangaphambili
Uphi na uVictoria Digiorgio ngoku? Sisityebi kangakanani iqabane likaJohn Gotti?
UMelanie Hinton Biography, Ubudala, ukubaluleka kweNet, ubude, i-Wiki
Kutheni uMarie Osmond eyeka i 'The The Talk' emva kwesizini enye
Umfazi kaGregory Jarvis, uMarcia Jarvis namhlanje: Uphi ngoku?
Yonke into ofuna ukuyifumana
U-Emily Riemer (WCVB) Wiki Biography, ubudala, indoda, okhulelweyo
UChris McNally utyhila imiyalezo enentiyo evela kubalandeli beWCTH
Ijaji yaseTamra ifuna uEmily Simpson agxothwe kwabafazi basekhaya
IiBeatles: UGeorge Harrison ‘wazama wasilela ukukhuphisana’ noLennon noMcCartney
Intombazana yomzi jt net efanelekileyo
UJennifer wasefama intombazana yesosi
yeyiphi i-salon eyenziwe ngu-lesh
I-savannah guthrie inexabiso elifanelekileyo
phezulu 9 kwilizwi
iprincess diana uxwebhu olubhaliweyo